နောက်ဆုံးတွင် စွဲလမ်းဆေးပညာအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းပြုမူခဲ့ပါသည်အဆိုပါ DSM ကတည်းကအလိုမရှိ။
အဆိုပါလိင်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအထောက်အထား Disorders လာမည့်ဘို့အုပ်စုတစ်စုအလုပ်လုပ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5) သည်အဆိုပြုထားသောအရာများကိုဖြုတ်ချရန်၊Hypersexual Disorder"(အခြားအပြုအမူများအကြား, မသင်မနေရညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသော) မှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် နောကျဆကျတှဲမှ။ ထို့ပြင်အလုပ်အုပ်စု၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကြောင့်အကြံပေး “ Hypersexual Disorder” ကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်မရှိရှင်းပြချက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။
DSM သည်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏သမ္မာကျမ်းစာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရောဂါမပြန့်ပွားပါကအာမခံကုမ္ပဏီများသည်ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များကိုပြန်လည်ပေးဆပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များကလူနာများကိုရောဂါရှိကြောင်းမပြပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကမ္ဘာတွင် "Dality ပြောတာက Reality ဆိုတာပါ။ "
ဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ။ သင့်အခြေအနေသည်မတည်ရှိပါကသင်အားမကျေနပ်မှုအတွက်ကုသမှုခံယူပါလိမ့်မည် ရောဂါလက္ခဏာ ဤအခြေအနေများသည်သင်၏အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိဟုယူဆခြင်း (ဥပမာစိုးရိမ်ခြင်း၊ ED၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပြproblemsနာများ) ဖြစ်သည်။ သင်၏အမှန်တကယ်ရောဂါဗေဒနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်အရာကမှသင့်အားစိတ်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများအကြောင်းကိုမည်သူမျှမရှူပါ။ ၎င်းသည်သင့်အား Vicodin ကိုသင့်ခြေထောက်ကျိုးမှုအတွက်ပေးဆပ်ခြင်းအစား၎င်းကိုချိန်ညှိခြင်းအစားပေးရခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သင်ကသရုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းပေါ်တွင် ဆက်၍ အားဖြည့်နိုင်သည်။
DSM ၏ရောဂါဗေဒ - လောင်းကစားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည့်အတိုင်းအခြားအလွန်မြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောမဟုတ်သည့်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းအားအမည်ပြောင်းခြင်းအမျိုးအစားသို့အဆင့်မြှင့်လိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများသူတို့စွဲများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောကုသနိုင်သော -so. ဘယ်လို, အခြား (compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ) အနေဖြင့်သိပ္ပံ၏နာမ၌, တဦးတည်းမလှူ (လောင်းကစား) တစ်ခုစွဲအန္တရာယ်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်နှင့်အနောက်တိုင်းပယ်ချသလဲ?
မကြာသေးမီနှစ်ထဲမှာ, DSM ယူပြီးထားပြီး အပူတွေအများကြီး အသစ်ကစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါဗေဒထုတ်လုပ်ဘို့, အရာအချို့ကိုရောဂါ-ထပ်ခါထပ်ခါ-ဆေးဝါးအတွက်ရလဒ်ပါပွီ။ ကျနော်တို့လူတွေလုယူ လိုက်. သို့မဟုတ်ပိုလျှံမှ raunchy ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရုံဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စုပေါင်းလည်ပင်းထွက်ကပ်ဖို့မ၎င်း၏အလိုဆန္ဒနားလည်ပါတယ်။
သို့သော်လောင်းကစားဝိုင်းပြင်ဆင်မှုအရအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်ယခုအခါမှန်ကန်သောထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားပြီးတိုင်းတာနိုင်သောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်လာသည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုယခုစစ်ဆေးနိုင်သောရောဂါဗေဒများအဖြစ်သတ်မှတ်သည် ဦးနှောက်၏ neurochemistry အတွက်။ " အလားတူဇီဝကမ္မယန္တရားများနှင့်ခန္ဓာဗေဒလမ်းကြောင်းများသည်လောင်းကစားခြင်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည်။ ယခုကြှနျုပျတို့ကိုတိုင်းတာရန်ကိရိယာများ အားလုံးစွဲနှင့်ဆက်စပ် (လူဦးရေကိုဖြတ်ပြီး) ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို။ တစ်ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူအဖြစ် မက်စ် Wiznitzer ကရှင်းပြသည်,
[ဦး နှောက်] ပုံရိပ်သည်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအတွက်ဘာလဲ၊ ဒီပရိုဖိုင်းသည် dopamine စနစ်ဖြစ်သောဆုချီးမြှင့်မှုစနစ်အတွက်ဘာဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။ ... [T] သည်သူ၏အပြုသဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှုမဟုတ်သောအထူးသီးသန့်လုပ်ဆောင်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ မည်သည့်စွဲလမ်းမှုပင်ဖြစ်ပါစေအတူတူပင်နယ်မြေများကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
အလားတူပင်စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာရှင်ဘရိုင်ယန် Knutson လေ့လာတွေ့ရှိ:
ဒါဟာသင်ဆေးဝါးဗေဒနှင့်အတူ [ရှင်သန်မှု-တိုးမြှင့်အပြုအမူဆုချမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲကြောင်းဦးနှောက်ဆားကစ်] derange နိုင်လျှင်, သင်ကအရမ်းသဘာဝကဆုလာဘ်နှင့်အတူကလုပျနိုငျကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ဆိုလိုတာပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် DSM မှ“ Hypersexual Disorder” ကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းထက်၊ စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါများ။ ယခုပင်လျှင်အဆိုပါ DSM ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုခံစားနေရပြီးရှိသူများမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောပိုပြီးအစွန်းရောက်ဆွဖို့အနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်တင်းမာမှုရှိနေသော်လည်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်အလားတူရောဂါလက္ခဏာတွေပြကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ (စံနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ.)
နှစျသိမျ့၏ oodles ရှိပါတယ် လောင်းကစားသမားများ၏ ဦး နှောက်အပေါ်လေ့လာမှုများ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင့်အလွန်အကျွံလောင်းကစားပြသအားလုံးသော Scan ဖတ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုများ, အသုံးပြု. အလွန်ဥစ္စာချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင့်ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဆနျ့ကငျြ, အလွန်အကျွံ၏ဦးနှောက်ကိုသက်ရောက်မှုအပေါ်သာစုံတွဲတစ်တွဲလေ့လာမှုများရှိပါသည် အင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုခြင်း or လိင်စွဲလမ်း။ သို့သော်၎င်းတို့သည်လောင်းကစားသူများ၏ ဦး နှောက်တွင်သိသာထင်ရှားသည့်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြသည်။
ဒီတစ်နေရာတည်းမှာရှိတဲ့ဒီဒေတာဘေ့စ်များကဒီနေ့လိင်မှုကိစ္စအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရ၊ သူတို့ကဆိုလိုသည်မှာအလွန်လိုအပ်နေသောသုတေသနကိုကျွန်ုပ်တို့မပြုလုပ်နိုင်သေးပါ။ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းရတော့မည်ဖြစ်သည်။
လောင်းကစားသုတေသီများပြီးသားတီထွင်ခဲ့ကြ သွေးစစ်ဆေးမှု, သိမြင်မှုစမ်းသပ်မှု နှင့်, သင်တန်း, ဦးနှောက် Scan ဖတ် ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျသော့ချက်စွဲသောလက္ခဏာများကိုတိုင်းတာသည်။ တစ် ဦး ချင်းအသုံးပြုရန်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုများသည်လက်တွေ့မကျသော်လည်းဆေးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအတွက်ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်သည့်စံနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ dopamine dysregulation (numbed အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု)၊ sensitization နှင့် hypofrontality: hypersexual စွဲလမ်းမှု၏ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် DSM စံသတ်မှတ်ချက်အရစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများရှိနေခြင်း (သို့မဟုတ်မရှိခြင်း) ကိုပိုမိုတိကျစွာသိရှိနိုင်ရန်အတွက်အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ချိတ်ဆက်နေသူနှင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသူတစ် ဦး နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Tiger Woods-type အပြုအမူကိုတင်ပြသူတစ် ဦး ၏ ဦး နှောက်တွင်သိသာသောခြားနားချက်ရှိသည်။ ဤပြန်လည်နာလန်ထူနေသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ၏ပုဂ္ဂလဒိexperience္ဌိအတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစားပါ။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် PMO မရှိ (porn / masturbation / orgasm) ပြီးနောက်၊ ငါလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကို - P မပါဘဲ M နှင့် O - ကြိုးစားခဲ့ဖူးသည်။ နှစ်ရက်အကြာတွင်ငါ P ကို ​​MO ကိုထပ်မံဖြည့်တင်းလိုက်ပြီးပြန်ပေါ်လာသည်။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံနှစ်ခုလုံးလုံးကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်။ MO ဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာချိုမြိန်ခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် PMO session သည်ကျွန်ုပ်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်လုံးလုံးလျားလျားခံစားခဲ့ရသည်။ ရုပ်ပုံတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမီးတောက်လောင်စေသည့်ပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ငါ့ ဦး နှောက်ကငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြတ်သွားတဲ့“ dope surge” လိုခံစားရတယ်။ ရုတ်တရက်ငါအရာအားလုံးထက်ပိုမိုပြင်းထန်စွာကြားနိုင်ခံစားရတယ်။ ထိုအခါငါကငါ့ကိုကျော်သုတ်သင်ရသောမိုcloud်းတိမ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ထုံသွား၏။ အဲဒီခံစားမှုကအနည်းဆုံးနှစ်ရက်ကြာခဲ့တယ်။ သစ္စာ။
DSM အလုပ်အဖွဲ့သည်ယနေ့လိင်ဆက်ဆံမှုအလွန်ကြီးထွားမှုကြောင့်ရောဂါရှိသူ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိသူများအားကူညီရန်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီပိုမိုသုတေသနပြုမှုများပြုလုပ်လိုသည်မှာသေချာသည်။ များလွန်းကျနော်တို့လို,။ ဤတွင်, သို့သော်, နှောင့်နှေးနွှဲပါလိမ့်မယ်, စောစောအသက်တာ၌အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော porn အသုံးပြုမှုထဲသို့ကျသောသူတို့အဘို့အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်ရှိ။ (အများအားဖြင့်ရန်ပုံငွေများနှင့်အတူလူကြီးများမှချုပ်ထားသောလောင်းကစားဝိုင်း, မတူဘဲ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအခမဲ့အပေါင်းတို့နှင့်အသက်အရွယ်မှရရှိနိုင်ပါသည်။ ) မှန်ကန်သောရောဂါမရှိရင်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်မတိုင်မီရှည်လျား start သူကိုလူငယ်အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်စိတ်ကို-ကွေးတင်းမာမှုတစ်လိမ်သို့ချော်ဘယ်တော့မှ may ကဲ့သို့ခံစားရဘယ်အရာကိုချိန်ခွင်လျှာတွေ့ရှ။
DSM သည်ယခုလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ
၁။ လောင်းကစားခြင်းနှင့်မတူသည်မှာယနေ့ porn အသုံးပြုခြင်းသည်လူနည်းစုလူနည်းစုသာဖြစ်သည်။ 2008 စာရင်းဇယား ယောက်ျား ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုပြီးဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ DSM အလုပ်အဖွဲ့သည်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းစွာခန့်မှန်းနေပါကနောင်လာမည့် DSM အလုပ်အဖွဲ့သည်သင်တန်းကိုပြောင်းလဲသည့်တိုင်အောင်များစွာသောသူတို့သည်မလိုအပ်ဘဲဆင်းရဲဒုက္ခခံရနိုင်သည်။ အသစ်တစ်ခုကိုစစ်တမ်း 2000 ငယ်ရွယ်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများ လိင်အဘို့အင်တာနက်ကို အသုံးပြု.5အမျိုးသမီးများ၏% နှင့်ယောက်ျား၏ 13% ဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြဿနာများသတင်းပို့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ တစ်ဦးက အမေရိကန်ကောလိပ်ယောက်ျား၏ 2009 လေ့လာမှု porn-related ပြဿနာများအသိအမှတ်ပြုအသုံးပြုသူများအပင်မြင့်မားရာခိုင်နှုန်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒေတာအငယ် porn / ချက်တင်သုံးစွဲသူများကပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုမြင်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းပေးထားသိသိသာသာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့များစွာသောပူပသုံးစွဲသူများ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့လျှောသူတို့သည်အထူးသဖြင့်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရက်သတ္တပတ်အထိသူတို့၏စွဲ-related လက္ခဏာတွေ၏အရင်းအမြစ်ခဲ့ကြောင်းအသိအမှတျမပါဘူး ပြီးနောက် သူတို့သည်ထွက်ခွာသွားပြီးစိတ်နေစိတ်ထား၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒနှင့်လိင်ဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုတိုးတက်စေသည်။ အကယ်၍ သင်၏ရွယ်တူချင်းများသည်အင်တာနက်ပေါ်၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်သည်ဟုသင်သိလျှင်ကျွမ်းကျင်သူများက“ အလွန်အကျွံ” ကဲ့သို့သောအရာမရှိဟုသင်ထင်လျှင်၊ သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများသည်အကြောင်းရင်းအားအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ထပ်မံမစဉ်းစားမီတော်တော်လေးဆိုးရွားရမည်။ အီတလီဆီးရောဂါပါရဂူသို့သော်ခွန်အားမရှိခြင်း-porn connection ကိုလုပ်ဖို့စတင်နေကြသည်။
၂။ ပိုမိုသုတေသနပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်၏သက်သေသာဓကသည်သဘာဝဆုလာဘ်များ၏စွဲလမ်းစေသောအလားအလာကိုခိုင်မာစွာထောက်ခံသည်။ သိနာတောင်ပေါ်တွင်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာ ဦး စီးဌာန အဲရစ် Nestler "တိုးတက်လာသောအထောက်အထားများအရ VTA-NAc လမ်းကြောင်းနှင့်အခြား limbic ဒေသများသည်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အစားအစာ၊ လိင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့သောသဘာဝဆုကျေးဇူးများ၏ပြင်းထန်သောအပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုဖျန်ဖြေပေးသည်။ ဤဒေသများသည်ပင်သဘာဝစွဲလမ်းမှု (သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကိုမသင်မနေရစားသုံးမှု) ကဲ့သို့သောရောဂါဗေဒအလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ယနေ့အချိန်တွင်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်မှုပြုသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုတေသနပြုသည်ဖြစ်စေ၊
၃။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်စွဲလမ်းစေနိုင်မှုကိုပိုမိုမြင့်တက်စေသည့်အချက်များ (ဥပမာ - အကန့်အသတ်မရှိသောညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ၂၄/၇) နှင့် ၀ ယ်လိုအားအသစ်စသည့်အမျိုးမျိုးသောအချက်များကိုလည်းခွဲခြားထားသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်ယနေ့ခေတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်၊ အပျော်အပါးအပေါ်တုန့်ပြန်မှုအားလျော့နည်းစေပြီးအပြည့်အဝစွဲလမ်းစေသည့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချရန်ခိုင်လုံသောသိပ္ပံနည်းကျအကြောင်းပြချက်များရှိသည်။ လိင်မှုဗေဒပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို“ အန္တရာယ်ကင်းသော” အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းတွင်လက်ရှိနေရာချထားသော်လည်းအမှန်မှာ၊ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်ယခင် erotica ထက် ပို၍ စွဲလမ်းစေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အတိတ်၏ငှားရမ်းထားသောဒီဗီဒီများပင်ဖြစ်သည်။ ED ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး Playboy သို့မဟုတ်ဖောက်သည်တစ်ဦးလုပ်နေတာဟာပီဇာယောက်ျားလေးတစ်ဦးငှားရမ်း။ ဆနျ့ကငျြ, အဆုံးမဲ့အသစ်အဆန်းများနှင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်, စံပြထုတ်ရှာကြံ, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတင်းမာမှုထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းမှမစိုက်ကိုနှိပ်ခြင်းအားလုံးကိုသဘာဝအမွတ်မပြေနိုင်သော override နှင့် dysregulation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုငျသော dopamine လွှတ်လိုက်ပါ။ အသစ်အဆန်း, တကယ်တော့သူ့ရဲ့အဖြစ်ထမ်းဆောင်နိုင် ကိုယ်ပိုင် neurochemical ဆုလာဘ် အတော်လေးဆိတ်ကွယ်ရာအော်ဂဇင်ကနေ။ နောက်ထပ်ဘာဂါတစ်မျိုးတော့မလိုချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ချိစ်ကိတ်မုန့်ပုံစံနဲ့အချိုပွဲအတွက်သုံးကြိမ်ကယ်လိုရီကိုစားရလိမ့်မယ်။ သင့် ဦး နှောက်ထဲရှိ dopamine ၏ squirts သည်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုပယ်ဖျက်ပေးသည်။
၄။ လူငယ်ကြည့်ရှုသူများသည်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာများဖြင့်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအန္တရာယ်သည်ကြီးထွားလာနိုင်သည်။ (ငယ်ရွယ်သော ဦး နှောက်သည် dopamine ကိုပိုမိုထုတ်လုပ်သည်။ ပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။ ) ညစ်ညမ်းရုပ်သည်ညစ်ညမ်းသည်ဟုခေတ်ရေစီးကြောင်းယုံကြည်မှုရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ဝက်ဘ်တစ်လျှောက်လုံးပေါ်ထွက်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆိုဒ်များသို့လည်ပတ်သူများနှင့် Medhelp နှင့် Yahoo Answers စသည့် Q & A ဆိုဒ်များသို့လာရောက်သူများသည်မလိုမုန်းထားသည့်သုံးစွဲမှုနှင့်စွဲလမ်းသူများအတွက်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အခြားရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြသည်။ ဆုတ်ခွာ, သည်းခံနေခြင်း ပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန် (တိုးပွားလာဆွဘို့အလိုအပျသ), ပြောင်းလဲဦးစားပေး, ဒါကြောင့်ထွက်။ တချို့က uncharacteristic ဖွံ့ဖြိုး လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများနှင့် နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ် / ED။ ဦးနှောက်သုတေသနကဤလက္ခဏာတွေအားလုံးအကောင်းဆုံးအားလုံးစှဲ၏ဦးနှောက်-အခြေခံဝိသေသအတွက် dopamine dysregulation အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
၅။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် DSM သည်လာမည့်လက်စွဲစာအုပ်မှညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုပယ်ချလိုက်လျှင် ဦး နှောက်သုတေသနအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများကိုမည်သူထောက်ပံ့မည်နည်း။ DSM သည်သုတေသနတောင်းဆိုမှုများတွင်တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ပါ။ Sexology သုတေသီများသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်မှုကိုနားလည်ရန် (ထို့ကြောင့်ထုတ်ပယ်ရန်) လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမခံရသောကြောင့်၎င်းကိုအားမပေးပါ။ အပြုအမူစွဲစွဲလမ်းမှုသုတေသီများသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိကြောင်းကိုနားလည်သော်လည်းအခြားနေရာများတွင် (အဝလွန်ခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ) ကိုအာရုံစိုက်လေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်ပြီးပြည့်စုံသောသုတေသနကိုစောင့်ဆိုင်းရန်အကြောင်းမရှိပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သုတေသီများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုင်းတာရန်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများတွင်အဟန့်အတားများရှိနေသေးသည်။ လေ့လာမှုများသည် ဦး နှောက်၏သက်ရောက်မှုများကိုအပြည့်အ ၀ မရရှိနိုင်ပါ။ မှန်ကန်စွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်လေ့လာမှုများသည်ကြီးမားသောအတားအဆီးတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ထိန်းချုပ်အုပ်စုများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည် “ အပျိုများ၊။ " ၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လျှင်ပင်ကျင့် ၀ တ်ရေးရာကော်မတီများသည်ရိုးသားသောဘာသာရပ်များအားယနေ့ခေတ်အသုံးပြုသူများကြည့်ရှုလေ့ရှိသည့်အလွန်အမင်းနှင့် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောအမျိုးအစားများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းကိုအရေးယူရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အတိုချုပ်ပြောရရင် DSM ကမလုပ်ဘူးဆိုရင်အနာဂတ် DSM အလုပ်အဖွဲ့အချို့အတွက်အရာရာကိုဖြေရှင်းဖို့အချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းနေလိမ့်မယ်။ ဤအတောအတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည်တရားဝင်မရှိသောကြောင့်လူနာများအားမဖွယ်မရာညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ထိရောက်စွာကုသရန်နည်းလမ်းမရှိတော့ပါ။ အမှန်ဆိုရလျှင်၊ “ Hypersexual Disorder” ကိုရွှေ့ပြောင်းရန် (သို့) ဖယ်ရှားရန်အလုပ်အဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအပြည့်အ ၀ သတိပြုမိပါက (ဖောက်သည်များအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်စိတ်အားထက်သန်သောဖောက်သည်များနှင့်) Clinician များစွာသည်ဒေါသထွက်ကြလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ရောဂါဗေဒသို့အနေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်လိုင်းဖြတ်ကူးသည်အထိပုံမှန်ကြှနျုပျတို့အားလုံးမိန့်တော်မူ၏သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်ဆန့်ကျင်, hyperstimuli အသုံးပြုမှုအများအပြားများအတွက်ချောဆင်ခြေလျှောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ DSM အလွန်အကျွံ porn အသုံးပြုမှုတစ်ခုစွဲ-ဆက်စပ်ရောဂါကြောင်းဝန်ခံကြလျှင်, သွယ်ဝိုက်နှင့် ပတ်သက်. porn အသုံးပြုသူများကပညာပေးဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ရောဂါလက္ခဏာ ကြောင်းအချက်ပြမှုစွဲအလုပ်မှာ process လုပ်တယ် ရှေ့မှာ သူတို့စွဲဖြစ်လာသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုလျှော့ချခြင်းသည်“ ပုံမှန်” မဟုတ်ဘဲသည်းခံမှု၏သက်သေသာဓကဖြစ်ကြောင်းအလျင်အမြန်သိရှိလာသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ရပ်တန့်ပြီး၎င်းတို့၏ ဦး နှောက်ကိုပုံမှန် sensitivity ကိုပြန်လည်ပေးလျှင်လက္ခဏာများပြန်လည်သက်သာလာလိမ့်မည်။ ဆုတ်ခွာမှုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအတိုင်းအတာအပေါ်မူတည်ပြီးနာကျင်မှုနှင့်စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်၊ နှင့်အပြည့်အဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးလကြာနိုင်ပါတယ်။
သူ / သူမ၏ ဦး နှောက်တွင်ဘာဖြစ်နေသည်ကို၎င်း၊ သူ၏အပြုအမူက၎င်း ဦး နှောက်၏ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ခြင်းသည်လူနာ / ၀ န်ဆောင်မှုကိုအားပေးသည်။ သူ၏ ဦး နှောက်၏သဘာဝအထိခိုက်မခံမှုကိုပြန်လည်ရရှိသည်နှင့်အမျှသူ၏တိုးတက်မှုနှင့်အားနည်းချက်များကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ မကြာခင်မှာပဲသူဟာအကောင်းမြင်တဲ့ခံစားချက်ရှိလာပြီးပြန်လည်ကျင့်သုံးမှုကပင်ပညာရေးဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကအမူအကျင့် - စွဲလမ်းနေသည့် ဦး နှောက်သိပ္ပံပညာကို၎င်းတို့၏အလွန်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုအသုံးချခဲ့သည့်အမျိုးသားလေး ဦး ၏မှတ်ချက်များကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုမျှမ-လိင်စိတ်ကာလကြုံတွေ့ပေမယ့်ယခုရှိသမျှတို့ကိုငါနေ့ရက်လားနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ငါလာသောအခါအမြိုးသမီးမြားန်းကျင်ယဉ်ဖို့ရှိသည်တိရစ္ဆာန်နဲ့တူခံစားမိပုံရသည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်မအဘယ်သူမျှမနှောင့်ရှက်လိင်ကာလအတွင်းတစ်ဦးအစိုင်အခဲစိုက်ထူရရှိနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းရှိသည်။ ဤသူသည်ငါ months ago 1-2 ခဲ့တူသောအမာခံညစ်ညမ်းမှတစ်နှစ်ခွဲ-စိုက်ထူလိင်တံ stroking ကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်လျက်ဆန့်ကျင်နေသည်။
ဤအချိန် [၁၃ ရက်ပတ်လုံးလိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း] သည်လည်းလိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏ကြောက်ရွံ့မှုအချို့ကိုအားဖြည့်ပေးပြီးကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဤစွဲလမ်းမှုကိုဖြတ်လိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာရေးနှင့်လုံးဝလိင်ဆက်ဆံနိုင်လိမ့်မည်ဟူသောအချက်ကိုအားဖြည့်ပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်မမူးနေပေမယ့်မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့အတူငွေရောင်နံရံတစ်ချောင်းရောက်လာတယ်။ တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ငါ့လိင်အရသာများသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာမည်၊ ၎င်းသည်အလွန်အားတက်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့လေးပတ်ကဒီ vanilla ပစ္စည်းကငါ့ရေဒါကိုတောင်မှမပျောက်စေနိုင်ဘူး၊ ဟုတ်ပါတယ်, ငါမူးရူးဆက်လက်အဖြစ်, ငါပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းပေါ်သို့တိုး, နောက်တဖန်ငါ့အအရသာအပေါ်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအောင်။ ငါတူအလုအယက်ရဖို့တိုးမြှင့်ခဲ့ရသည်။
ငါသုံးနေတဲ့ PMO ကော့တေးအပြည့်နဲ့ပါဝင်တာအခု ၃၄ ရက်ရှိပြီ။ ငါကြာကြာသွားလေလေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကတစ်တန်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းရှေ့တွင်အလားအလာကောင်းတစ်စုံရှိသည် - ဒီရက်သတ္တပတ်ကိုရက်သတ္တပတ်တစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သင့်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အလှတရားကိုပိုပြီးတန်ဖိုးထားလေးစားမိတာကိုလည်းသတိပြုမိလိုက်တယ်။
သင်အနည်းဆုံး ၃ ပတ်ခန့်စီမံနိုင်သည်ဆိုလျှင်ဤအရာအားလုံးသည်မည်မျှအစွမ်းထက်သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းခြင်းမရှိခြင်းသည်အလွန်သိသာထင်ရှားပြီးကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်တူသည်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုအခြေခံအားဖြင့်မှားတာဘာမှမရှိဘူးလို့မျှော်လင့်ချက်ပေးခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာသည်။ လူတိုင်းနှင့်အတူ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော့်ဘဝဟာလူမှုရေးအရစကားပြောနေတုန်းပဲ။ ငါတစ်ခါတလေပြန်ဖြစ်လာရင်တောင်မှငါမြင်ရပြီ။
အဆိုပါ DSM အဆိုပါကော်ဇောအောက်မှာညစ်ညမ်းပြဿနာများချင်းနှင်းလျှင်, ထိုအ (အများအားဖြင့်အငယ်) ကလူတိကျစွာသူတို့ရဲ့အခွအေနနားမလည်စရာလမ်းနှင့်အတူထွက်ခွာနေကြသည်။ သူတို့ကအလွယ်တကူဘဝ-in ကိုအမှားအဘို့စိတ်ကိုမူးယစ်ဆေးအပေါ်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ဤဆိုးရွားလှသည့်ရလဒ်သည်ရာစုနှစ်ဝက်ခန့်မှားယွင်းသောလွဲမှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လွဲမှားစွာလွဲမှားသောတရားသေအယူဝါဒ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာလိင်ပညာရှင်များကအခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်မတူဘဲ၊ hypersexuality သည်ယခင်ကရှိခဲ့သောအခြေအနေများဖြစ်သော ADHD, OCD, စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု / အရှက်ရမှုတို့မှပေါ်ပေါက်လာသည်ဟုယူဆကြသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရောဂါဗေဒမဖြစ်စေနိုင်သည်ဟူသောသူတို့၏တင်းကျပ်သောယုံကြည်မှုများကြောင့်တစိတ်တပိုင်းဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ကလေးဘဝဒဏ်ရာများသည်အချို့သောလူတို့၏စွဲလမ်းမှုကို ဦး တည်စေနိုင်သည်ဟုမှန်သော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်း hypersexuality တွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး dopamine ပိုလျှံမှုသည်သူ့ဟာသူ dysregulate မလုပ်နိုင်ပါ။
တကယ်တော့, တသမတ်တည်း porn အသုံးပြုသူများကိုပြန်လည်ထူထောင် အစီရင်ခံစာတိုးတက်မှု သူတို့အခွအေနမြေား၏အလွန်လက္ခဏာတွေအတွက်ဖြစ်စေမသူတို့ပါမယ်ထိုကဲ့သို့သောအခွအေနေခဲ့ရသည်။ တနည်းအားဖြင့်သမျှဟာသူတို့ရဲ့စမှတ်, သူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ အပြုအမူ ကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်ငါတို့သိအလုံးစုံတို့အဘို့, သုတေသနတစ်နေ့နေ့မှာထိုကဲ့သို့သော ADHD, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်လေ့ရောဂါအခြေအနေများများအတွက်ဆေးဝါးများရိုးရိုးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု-အများကြီးစိတ်မကျဆေး Antidepressants လေ့ကျင့်ခန်းထက်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်သကဲ့သို့ရပ်တန့်ထက်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းပြသပေလိမ့်မည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ယခုလူငယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုရှာသောအဘို့အစိတ်ပျက်စရာအများဆုံး porn-related လက္ခဏာ ED ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာဘ ၀ အတွက်ပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုကြောက်ရွံ့နေကြပြီး၊ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေကြတယ်။ သို့သော်သူတို့ကသူတို့၏ဆရာဝန်များကို ED နှင့်ပိုလျှံခြင်းအကြောင်းမေးရန်စဉ်းစားပါက၎င်းတို့သည်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် ED ကိုမဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းအလျင်အမြန်အာမခံထားသည်။ သို့သော်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ဟုပြောသောလူငယ်ယောက်ျားလေးအားလုံးနီးပါးသည်အမှန်တကယ်တွင်“ အင်တာနက် porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း” ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်သူဖယ်ထုတ်လိုက်သောသတင်းမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မိမိ ED (မှားယွင်း) ကိုဖြစ်စေသည်မဟုတ်ပါ။
ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများနှင့်ပatingိပက္ခဖြစ်ခြင်းသည်လူနာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ဒါဟာစိတ်ကျေနပ်မှုကိုပိုရစေပြီး၊ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုပိုရစေပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (သို့မဟုတ်) နှစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ပြproblemsနာများဖြစ်စေသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအတောအတွင်းဆရာဝန်များသည်သူတို့၏ငယ်ရွယ်သော ED လူနာများ၏ဟော်မုန်းများစသည်တို့ကိုစစ်ဆေးပြီးအမှားတစ်ခုခုကိုမတွေ့ပါက DSM ချို့တဲ့သော DSM မှလိုအပ်သော pat အဖြေများပေးရသောအခါသူတို့၏ပြproblemsနာများမှာ“ စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်” ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူသည်စနစ်တကျရောဂါရှာဖွေပြီးပညာတတ်ပါကပြproblemနာကိုနောက်ပြန်လှည့်နိုင်သည့်အပူတပြင်းလူငယ်တစ် ဦး အတွက်အမှန်ပင်နှစ်သိမ့်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
DSM အနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပြုအမူစွဲလမ်းမှုသိပ္ပံပညာကိုအပြင်းအထန်ရင်ဆိုင်ရန်အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်သည်။ လိင်ဆိုင်ရာတွန်းအားများသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိအပြောင်းအလဲများကိုနားလည်ရန်အကူအညီလိုအပ်ပြီးသို့မှသာ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အာရုံခံစားနိုင်မှုသို့ပြန်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ “ ယခင်အခြေအနေများ” အတွက်ဆေးနှင့်တိုင်ပင်ခြင်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ပညာရေးဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်မည်သူမဆို၏လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒများကိုပြုပြင်ခြင်းမှတွန့်ဆုတ်နေသည်။ သို့သော်ယနေ့“ ပုံမှန်” (ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်အချို့သောအသုံးပြုသူများတွင်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေသည် ထူးခြားသော တစ်ဦးဇီဝကမ္မရှုထောငျ့မှ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကျနော်တို့မကြာသေးမီစွဲ-သိပ္ပံတွေ့ရှိချက်များနှင့် diagnostic tool များထက်သမိုင်းဆိုင်ရာပညာသင်နှစ်ယူဆအလုပ်သမားအားဖြင့်ဦးနှောက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ superstimuli ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အလွန်ရှင်းလင်းသောရရန်လိုအပ်သည်။
အဆိုပါ DSM လိင်နှင့်မကြာသေးမီကဦးနှောက်သိပ္ပံအကြားလေးနက် link ကိုသူတို့ရဲ့အသိအမြင် jumpstarts လျှင်တောင်မှပညာသင်နှစ် sexologists တနေ့ဝမျးသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ စွဲသုတေသနသူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာအလွန်ဦးနှောက် circuitry အကြောင်းကိုအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များထုတ်ဖော်နေပါတယ်။ အကျိုးကို circuitry အုပ်ချုပ် / လိင်စိတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, ထူထောင် နှင့်စွဲအပြင်အော်ဂဇင်။ ဦးနှောက်ကဒီ circuitry အကြောင်းကို သာ. ကောင်း၏ပညာရေး, တကယ်တော့, တစ်ဦးထက်ပိုသောဉာဏ်အလင်းနားလည်မှုများကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ် ဝေဖန်ရှုထောင့် လူ့လိင်နှင့် pair တစုံ Bond.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သောလူငယ်တိုင်းနီးပါးသည်အင်တာနက် porn / chat စကားပြောနည်းကိုရှာဖွေနေကြသည်။ မိန်းကလေးများအသုံးပြုမှုမှာလည်းကြီးထွားလာသည်။ DSM သည်တရား ၀ င်လျစ်လျူရှုသောကြောင့် Porn ၏ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမပျောက်ကွယ်နိုင်ပါ။ “ ညစ်ညမ်းမှုအားလုံးသည်အန္တရာယ်မကင်းဘူး” ဟူသောခံယူချက်မရှိသောခံယူချက်ကြောင့်သော့ချက်ကျသောအလုပ်အဖွဲ့ကိုတာရှည်လွန်းစွာ inertia အဖြစ်သွတ်သွင်းခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဤပညာရှင်များက“ ညစ်ညမ်း” ဟူသောစကားလုံးကို“ လှုံ့ဆော်မှု” ဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါက၎င်းတို့၏အနေအထားအားနည်းချက်ကိုချက်ချင်းမြင်တွေ့လိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုစွဲ-related ရောဂါအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူကုသတစ်ခုလုံးအဖြစ် Psychiatry အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ align မယ်လို့:
[စိတ်ရောဂါကုသမှု] ၏ဉာဏ်ရည်အခြေခံသည်ပုဂ္ဂလဒိive္ 'စိတ်' ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအပေါ် အခြေခံ၍ စည်းကမ်းတစ်ခုမှအခြားအာရုံကြောသိပ္ပံသို့ပြောင်းလဲနေသည်။ ” သောမတ်စ် Insel
DSM သည်၎င်း၏မကြာသေးမီကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လည်မစဉ်းစားပါက၊ ယနေ့ခေတ်ဖန်တီးထားသောအီရိုတီကာကိုစွဲလမ်းနေသူများကသူတို့၏ရောဂါဗေဒကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုပြုလုပ်ရန်လွဲမှားစွာရှာဖွေခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ အစားထိုး DSM အသစ်၏ဖန်တီးသူများက ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်နှင့် hypersexual disorders တို့၏ဆက်စပ်မှုကိုအလေးအနက်ပြုရန်ပြုလျှင်၊ သူတို့သည်လူတိုင်း၏လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လိင်အပျော်အပါးအတွက်အစာစားချင်စိတ်ကိုကာကွယ်ရန်များစွာလုပ်နိုင်သည်။
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကို? ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder (2018) ။ "